अमेजनमा पूर्ण खोजी अनुसन्धान कसरी गर्ने?
खोजशब्द अनुसन्धान अमेजन अनुकूलन अभियानको एक अभिन्न भाग हो जुन अमेजनमा सुरुवात तपाईंको उत्पादनको शुरुवात स्तरमा गर्नु पर्छ।. यस प्रक्रियाले तपाईंको बिक्रीलाई बढावा दिन सक्ने सबै सान्दर्भिक र उच्च-भोल्युम खोजी सर्तहरू खोज्न खोज्छ. यो सबै उपयुक्त शब्द जोडीहरू चयन गर्न महत्त्वपूर्ण छ जुन तपाईंका सम्भावित ग्राहकहरूले तपाइँको उत्पादन वा सम्बन्धित वस्तुहरू फेला पार्न प्रयोग गर्न सक्छन्. यो प्रयोगकर्ताको खोज क्वेरीमा उत्पादनको प्रासंगिकताको रूपमा सफलताको कुञ्जी हो सूचीबद्धमा आधारित खोजी सर्तहरू प्रासंगिकता द्वारा निर्धारण गरिनेछ। - loja dos oculos. यदि तपाइँ कम से कम एक लक्षित खोज शब्द को अनदेखी गरेको छ भने, प्रयोगकर्ताहरु को एक प्रश्नहरु को लागी खोज परिणामहरुमा तपाईंको संभावनाहरु उपस्थित हुनेछन्।. तपाईले Amazon खोज ट्राभरेसनहरू विश्लेषण गर्न र सबैभन्दा सान्दर्भिक खोज सर्तहरूको सूची बनाउनु भएको बिक्रीमा हराइरहेको बाहिर निस्कन. यस लेखमा, हामी एक समर्थकको जस्तै Amazon खोजशब्द अनुसन्धान कसरी गर्ने तरिकाहरू छलफल गर्नेछौं. यी सबै सुझावहरू हाम्रो व्यक्तिगत अनुभवमा आधारित हुन्छन्. त्यसोभए, हामी तिनीहरूलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन सक्छौं.
खोज्नको लागि सबैभन्दा सिद्ध प्रविधि अमेजनमा सबैभन्दा सान्दर्भिक खोज सर्तहरू आफैलाई तपाइँको ग्राहकहरूको जूतामा राख्नु हो. यसैले तपाईंको अनुसन्धान अभियान शुरू गर्न को लागी सोच्न को लागी कि तपाईंको संभावित ग्राहकहरु को तपाईंको सामान खोज गर्न को लागी उपयोग गर्न को लागी सोच को बारे मा सोचना. तपाईंले आफ्नो कारखाना किन्न चाहानुहुन्छ जब तपाईले यस्ता कारकहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ, तिनीहरू कुन प्रकारका प्रश्नहरू छन्, र तपाईंको उत्पादनको सट्टा तिनीहरूले कुन प्रकारका चीजहरू किन्न सक्छन्.
सबै खोजी सर्तहरू राख्नुहोस् जुन मनपर्छ र सामाजिक सञ्जाल च्यानलहरू मार्फत उनीहरूको उत्पादनको बारेमा के कुरा गर्दैछन् हेर्नको लागि आउनेछन्।. यसले तपाईंको सूचीमा केही आवश्यक संशोधन गर्न मद्दत गर्दछ र यसलाई पूरा गर्नेछ. यहाँ तपाईं केहि समिकरण, अक्षरांणीय, र संक्षिप्त नाम पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछ जुन सामान्यतया समुदायमा प्रयोग गरिन्छ.
अमेजन स्वत: पूर्ण
यो सरल काम गर्दछ. तपाईले भर्खरै खोजी बाकसमा केही अक्षरहरू ट्याप गर्न आवश्यक छ र उत्पादन स्वचालित रूपमा सुझावहरूको रूपमा देखा पर्नेछ. यो पूर्ण पूर्ण प्रकार्यले तपाईंलाई अधिकतम रूपमा सटीक डाटा प्रदान गर्दैन किनभने यसले अधिकांशका लागि सर्त खोजी देखाउँछ. तथापि, तपाइँ निश्चित हुन सक्नुहुनेछ कि तपाइँ वैध सर्त सर्तहरूसँग प्रस्तुत गरिनेछ जुन तपाईंको उत्पादन सूचीमा एकीकृत हुन सक्छ.
यो स्वत: पूर्ण प्रकार्य प्रयोग गरी तपाईंलाई सटीक र मर्मत चाहिन्छ. तपाईले अल्टरको पत्रको साथ तपाईंको उत्पादनको नाम पछ्याउन आवश्यक छ र कुन कुरा आउँछ भनेर ध्यान दिनुहोस्. तपाईंले खुदरा र ठुलो खोजी सर्तहरू फेला पार्नु भएको छ जुन तपाईले खुदरा खुदरा वस्तुहरूसँग मेल खान्छ. यसबाहेक, सुझाव गरिएका कोटीहरूले तपाईँका उत्पादनहरू सूचीबद्ध गर्न अन्य समूहहरू खोज्न मद्दत गर्न सक्छन्.
Amazon को सुझाव दिईयो
अमेजन को रैंकिंग दिशानिर्देशों को अनुसार, तपाईंको उत्पादनहरु केवल उन खोज सर्तहरु द्वारा देखी जानी छ जो तपाईं आफ्नो लिस्टिंग र बैक मा सम्मिलित. यसको अर्थ छ कि तपाईंले मात्र आफ्नो सूचीमा उच्च-भोल्युम खोज सर्तहरू समावेश गर्नुपर्दछ तर लामो समय सम्मका कुञ्जी शब्दहरू पनि सम्बन्धित छन् जसले तपाइँका संभावित ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्नका लागि तपाइँको मौकालाई अधिकतम पार्नेछ।. तथापि, तपाईसँग यो केवल एक मामला मा गर्नु पर्छ भने तपाईसँग कीवर्डको लागि केहि अतिरिक्त स्थान छ. तपाईंको प्राथमिक रणनीति तपाईको उत्पादनको वर्णन गर्ने खोज सर्तहरू ढाक्नु पर्छ.
यदि तपाईं धेरै भन्दा बढी समय र प्रयास खर्च नगरी सबै भन्दा सान्दर्भिक खोजी सर्तहरू पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं केवल एक गर्न सक्नुहुन्छ प्रतिस्पर्धी विश्लेषण. यो किबोर्ड प्रेरणा स्रोत कम गर्न सकिँदैन. यी शब्दहरूको लागि प्रतियोगीको उत्पाद शीर्षकहरू, बुलेटहरू र विवरणहरूमा खोजी गर्नुहोस्. यहाँ तपाईंले बहुमूल्य कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्न सक्नु भएको छ जुन तपाईले सोचेको छैन. सुनिश्चित गर्नुहोस् कि उत्पादन को उपयोग शीर्षक मा शामिल हो (f. ई. तेलको छालाको लागि; सुकेको छालाको लागि महिलाहरु, आदि को लागि. )
म सधैँ भन्नुहुन्छ कि यो सिंकोजाइजरको शक्ति यसको वास्तविक मा मूल्याङ्कन गरिएको छैन। मूल्य. यो उपकरण न केवल भाषाविद्हरूको लागि पनि अमेजन व्यापारीहरूको लागि उपयोगी हुन सक्छ. यो विशेष गरी उपयोगी हुन्छ जब यो उत्पादनहरु जुन एक भन्दा बढी नाम हुन सक्छ, वा फरक सन्दर्भमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. थेसोरसले तपाईंलाई विभिन्न प्रकारका शब्द फारामहरू र सममोदनहरू प्रदान गर्न सक्छ.
कीवर्ड अनुसन्धानको लागि यस उपकरणको प्रयोग गरी तपाईलाई निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ:
बहुवचन र एकल शब्द फारामहरू प्रयोग गर्नुहोस्;
तपाईंको खुदरा वस्तुको वर्णन गर्ने शब्दहरूको खोजी गर्नुहोस्;
साधारण मेस्लेलिंग्स नबिर्सन;
त्यहाँ ब्रान्ड नामहरूमा समीकरणहरू फेला पार्न प्रयास नगर्नुहोस्.
खोजशब्द शोध उपकरणहरू
सबै पहिल्यै उल्लेख गरिएको कीवर्ड अनुसन्धान प्रविधि प्रभावकारी हुन सक्छ यदि तपाईसँग मात्र एक उत्पादन लाइन छ र धेरै खाली समय. तथापि, तिनीहरूले तपाईंलाई खोजशब्द अनुसन्धान उपकरणको रूपमा उही नतिजा प्रदान गर्न सक्दछ. यदि तपाईंसँग तपाइँको प्रतिक्रियामा धेरै उत्पादनहरू छन् र तपाईंको बिक्री बढाउन चाहनुहुन्छ भने, व्यावसायिक अमेजन खोज सफ्टवेयर तपाइँको व्यवसायको लागि अत्यन्त कुशल हुनेछ.
Google ले संसारको सबैभन्दा ठूलो खोजी इन्जिन हो, जबकि अमेजन भनेको हो। उत्पादन अनुसन्धानका लागि सबैभन्दा ठूलो. यसको अर्थ Google मा सबैभन्दा अधिक खोज डेटा अमेजनको जस्तै हुनेछ. यस उपकरणको उपयोग गर्दै, तपाइँ एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईका सम्भावित ग्राहकहरू के खोज्दै हुनुहुन्छ र तपाईको अमेजन पे-प्रति-क्लिक अभियान को लागी लक्षित गर्न खोजी सर्तहरू खोज्नुहोस्।. यो उपकरण प्रयोग गर्न निःशुल्क छ र तपाईंलाई वेबमा सबै भन्दा राम्रो डेटा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ. GKP प्रयोग गरेर, तपाइँ आफ्नो लक्षित सर्त सर्तहरूको खोजी भोल्युम जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र प्रतिस्पर्धात्मक पदस्थ स्थानको विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ. तथापि, तपाईंलाई तयार हुनु आवश्यक छ कि Amazon को लागि GKP डाटा केहि फरक हुन सक्छ, त्यसैले तपाईंलाई यसलाई समायोजन गर्न आवश्यक छ.
त्यसैले, Google Keyword Planner ले चाल गर्दछ तर प्रयोग गर्न चुनौती हुन सक्छ. साथै, यो एउटा AdWords खाता चाहिन्छ.
एसएमआरश एक व्यावसायिक खोजशब्द अनुसन्धान उपकरण हो जसले तपाईंलाई लामो-पूरक प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। धेरै विश्लेषण र शोधकर्ताहरूको आधारमा सर्त सर्तहरू खोज्नुहोस्. यस उपकरणको साथ, तपाईं आफ्नो प्रतियोगी जासूस गर्न सक्नुहुन्छ र कुन खोजी सर्तहरू उनीहरूलाई सबैभन्दा ट्राफिक ल्याउन सक्नुहुन्छ. यसको सबै भन्दा राम्रो भाग यो हो कि तपाईंको कुञ्जीपाटीहरूले स्थान पङ्क्तिबद्ध गर्न सक्दछ.